अनगिन्ति प्रश्नहरुको बीच अन्तरक्रिया !
Friday, 29 December 2017 21:05
-डिल्ली राम अम्माई
२६ डिसेम्बर,बेल्जीयम , "एनआरएनएलाई श्रमिक मैत्री बनाउने प्रश्न संसार भरिका नेपालि श्रमिकहरुले उठाईरहेको र उठाउनु पर्ने महत्वपुर्ण प्रश्न हो। यसको हल खोज्नु र त्यो दिशामा एनआरएनलाई लैजानु पर्ने दायित्व हामि सबैको हो" भन्दै एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष लोक दाहालले पुष १२ अर्थात २६ डिसेम्बरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समापन गरे। उनको संकेत एनआरएनएलाई पुँजीपतिको क्लबको रुपमा लाग्दै आएको आरोप तर्फ थियो। जुन सान्दर्भिक र जायज हो। हाम्रा लगानी र प्रस्तावित योजना नेपाली श्रमिकको जिबनस्तर उकास्न सहायक छन वा केवल लगानीकर्ताको नाफालाई मात्र ध्यानमा राखेर निर्माण गरीएका छन् वा गरिन्छन ? प्रश्न संसार भरि उठिरहेका छन् । त्यसले यो संस्था उपर आसंका उब्जनु स्वाभाविक हो।
एनआरएनएका यस्तै धेरै बिषयमा छलफल गर्न र नेपालबाट आएका परराष्ट्रका सहसचिब कृष्णप्रसाद ढकाल लगायतको टोलीसंग आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न बेल्जियममा एक सार्थक अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको हो। आयोजना एनआरएनए बेल्जियमले गरेको थियो। कार्यक्रममा सभापतितव अध्यक्ष लोक दाहालले गरे भने प्रमुख र बिशिष्ठ अतिथिहरु क्रमश बेनेलक्सका महामहिम राजदुत लोक बहादुर थापा र एनआरएनएका उपाध्यक्ष कुल आचार्य थिए।
उक्त अन्तरक्रियामा नेपालबाट युरोपमा बसोवास गरेर वसिरहेका गैरआवासिय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास र समृद्धिमा कसरी सहभागि गराउने भन्ने विषयमा समेत ब्यापक छलफल भएको थियो । त्यो बिषयमा उपाध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्र र गैरआवासिय नेपाली संघको बीच अन्तरसम्बन्ध , त्यसका सहज र असजिला अनुभब र भाबि चासोको बारेमा बहस चलाएका थिए। उनले सहभागीहरुबाट आएका गैरआवासिय नेपाली संघ सम्बन्धि प्रश्नहरूबारे समेत प्रष्ट्याउने काम गरे। त्यस्तै राजदुत लोक बहादुर थापाले नेपाली पासपोर्टसंग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे प्रष्ट्याएका थिए।
गैरआवासिय नेपाली संघकि सचिब जानकी गुरुङ र युरोपका संयोजक शिब कुमार बरुवालले समेत डायस्पोराका समस्याहरुको पहिचान र आगामी योजनाबारे आफ्ना तर्कहरु राख्दै राज्य र डायस्पोराको सम्बन्धलाई आझ सुमधुर बनाउदै नेपालको बिकासमा प्रवासीहरुको योगदानलाई संस्लेषण गरेर जानु पर्ने तर्क राखेका थिए।
कार्यक्रममा नेपालबाट उच्चस्तरिय सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले गैरआवासिय नेपाली संघले गरिरहेका काम र प्रयासहरूबारे आँफु सन्तुष्ट रहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि यो संस्थाको आँफु र नेपाल सकारका संयन्त्रहरु सहयोगी रहने कुरा स्पष्ट पारे।
ढकालले अब नेपाल सरकारले गैरआवासिय नेपालीहरुसँग नेपालको विकास र समृद्धिमा साझेदारीको अपेक्षा गरेको बताए । उनले त्यसको महत्वपूर्ण सहयोग र सुरुवात पनि भइसकेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । सहसचिव ढकालले देशवासि जहाँ रहेपनि नेपालसँगको आत्मियता आर्थिक र भावनात्मक रुपमा जोडिएको बताए ।
त्यहाँ डायस्पोरा भरि रहेका नेपालीहरुले भोगिरहेका अनगिन्ति समस्याहरु तथा समाधानका विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपालमा लगानिको सुरक्षित वातवरण निर्माण गर्न पनि सहभागिहरुले सहसचिब मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन सचिब जिवन शर्माले गरेका थिए भने उपाध्यक्ष गोविन्द सिंह अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा युरोपका विभिन्न देशहरुबाट गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्षहरु , अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको साथै सर्वसाधारणहरुको उल्यख्य उपस्थिति रहेको थियो।